KAOMININA TALATAMATY : Novatsiana fitaovana tamin’ny antsasa-bidiny ny tantsaha
Efa fanaon’ny Kaominina Talatamaty hatramin’izay ny mifampitsinjo amin’ireo vahoaka tantsaha eny an-toerana. 12 avril 2019
Ho an’ny omaly dia notolorana fitaovana toy ny milina fanoseham-bary, borety sy ireo fitaovana maro hafa ilaina amin’ny fambolena ireo tantsaha ka mpikambana maherin’ny 150 teo ho eo no indray nisitraka izany. Raha ny nambaran’ny ben’ny tanàna mpitantana ity kaominina ity, Dokotera Rado Razafindratsimba dia tamin’ny antsasa-bidiny avokoa no nanjifan’ireo tantsaha ireto fitaovana ireto.
“Amin’ny fotoana toy izao dia ifampitsinjovana amin’ireo tantsaha ny famatsiana fampitaovana azy ireo satria efa manomana ny fotoam-pamokarana vaovao izy ireo ka rariny loatra raha tolorana fitaovana hanalana ny fahasahiranan’izy ireo”, hoy hatrany ity ben’ny tanàna ity.
Ankoatra ny fanolorana fampitaovana moa dia nisy ihany koa ny fanolorana masomboly izay samy nojifain’ireo tantsaha eny an-toerana tamin’ny antsasa-bidiny avokoa. Raha ny fanazavan’ny ben’ny tanàna hatrany dia ny Kaominina Talatamaty no miantoka ny antsasa-bidin’ny fitaovana sy ny masomboly rehetra fa ny an-tsasany ihany sisa no aloan’ny tantsaha.